Global na China Micromotor Industry Report, 2016-2020 - China Shandong Better Motor
Global na China Micromotor Industry Report, 2016-2020
Global micromotor mmepụta guzo 17,5 ijeri nkeji na 2015, a afọ-on-afọ-abawanye nke na 4.8%. N'ihi mkpọsa ime nke ugbua na ụlọ ọrụ na akụrụngwa, na mmepụta a na-atụ anya na-ebili ka 18,4 ijeri nkeji ke 2016 ma gakwuru 23 ijeri nkeji 2020.
China, ndị kasị ibu n'ụwa emeputa nke micromotors, mepụtara 12,4 ijeri nkeji na 2015, elu 6.0% si a afọ gara aga, na aza ajụjụ maka 70,9% nke uwa ngụkọta. The mba micromotor mmepụta na-atụghị dịrị 17 ijeri nkeji 2020 na a CAGR nke gburugburu 7.0% n'oge 2016-2020.
Keymicromotor emepụta na China includeJohnson Electric, eju Holding Limited, Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd., na Wolong Electric Group Co., Ltd. Johnson Electric, dị ka ndị kasị ibu micromotor emeputa ke China, oji kwa afọ revenue nke overUSD1 ijeri, na a zuru ụwa ọnụ ahịa òkè nke 4.3% na 2015.
Na China, micromotor okụt ya ngwa isi na omenala ubi, dị ka audio ngwaahịa, ezinụlọ ngwa, na ụgbọala, nke ẹkenịmde a jikọtara nkezi nke 52,4% na 2015. Dị ka omenala ngwa ahịa nwayọọ nwayọọ na-emekwu jupụta, isi ọkwọ ụgbọala nke micromotor ibu ga-abụrụ ndi dị ka ọhụrụ ume ụgbọala, wearable ngwaọrụ, robot, UAV, na smart n'ụlọ.
Ozi Industry: China si butekwara VCM maka mobile ọnụ ndị 542kk na 2015, elu 12.9% afọ na afọ, bi 45,9% nke ụwa si ngụkọta, n'ụzọ dị ukwuu chụpụrụ site smartphones na mbadamba PC. Na gradual saturation nke ahịa maka omenala n'ji ngwá electronic dị ka ama na mbadamba PC, wearable ngwaọrụ ga-aghọ a ọhụrụ ibu ebe, ozokwa boosting ina micromotor. The Chinese wearable ngwaọrụ ahịa na-atụghị mụbaa na-enwe kwa afọ ibu ọnụego nke n'elu 25%.
Ụgbọala: Na 2015, China na ina akpakanamde micromotor bụ 1,02 ijeri nkeji (24.9% nke uwa ngụkọta, na-atụ anya ka ebili ka 1,62 ijeri nkeji 2020), na-erughị 3% na-abịa site ọhụrụ ume ụgbọala. New ike ụgbọala ahịa na-eto na a compound kwa afọ ọnụego nke 152,1% n'oge 2011-2015 na China na, na nkwado nke mba na obodo atumatu, ga-anọgide na-enwe ike ibu ọkụ n'elu ọzọ di na nwunye nke afọ. Ọ na-eme atụmatụ na ahịa nke micromotors maka ọhụrụ ume ụgbọala ga na-agbago site n'elu 40% kwa afọ n'oge 2016-2020 na ina-uku nde 150 nkeji 2020.
Robot: 248.000 ulo oru robots na 6,41 nde ọrụ ígwè ọrụ e rere ụwa na 2015, elu 8.3% na 35,7% si na otu afọ tupu, karị, ọnụ na-eke a ina nke banyere 66,6 nde micromotors (enyocha ihe karịrị 300 nde nkeji 2020) . Na 2015, China guru nke 22,9% nke ụwa ulo oru robot ahịa na naanị banyere 5.0% nke ọrụ robot ahịa, na-egosi a nnukwu ohere maka ibu.
Consumer-ọkwa UAV: ​​Na 2015, uwa n'ji-ọkwa UAV sales karịa 200,000 nkeji, jiri ya tụnyere naanị ihe na-erughị 20,000 nkeji China. Dị ka ala-elu airspace nke nta nke nta meghee, na Chinese UAV ahịa ga-eweta a oge nke-eto ngwa ngwa na a ọnụego nke n'elu 50%.
Ke adianade do, ọhụrụ ahịa nke 3D obibi, smart n'ụlọ, ọgwụ na ahụ ike na ngwá, na akpaaka laabu-akwado site na atumatu ga-agaghịkwa na n'ime elu gia, n'ihu ụgbọala ina micromotors.
Global na China Micromotor Industry Report, 2016-2020 na-egosi followings:
Global micromotor ụlọ ọrụ (mmepe akụkọ ihe mere eme, ahịa size, ahịa Ọdịdị, asọmpi odida obodo, wdg);
Micromotor ụlọ ọrụ na China (ọnọdụ ghar, ahịa size, ahịa Ọdịdị, asọmpi odida obodo, bubata & ebupụ, wdg);
Main upstream ọrụ (magnet ihe, na-amị, wdg), metụtara ahịa size, ahịa Ọdịdị, mmepe na ọnọdụ, etc .;
Downstream ọrụ (ọmụma, ụgbọala, ezinụlọ ngwa oru, robot, UAV, 3D obibi, smart n'ụlọ, ọgwụ na ahụ ike na ngwá, wdg), metụtara ngwa ahịa;
11 Global na 10 Chinese micromotor emepụta (ọrụ, micromotor azụmahịa, mmepe na China, wdg).
Post oge: Feb-27-2018